Daraasad muujineysa in kalsoonida shacabku ku Qabeen Madaxda Qaranka Hoos u dhacday | Raadgoob
Daraasad muujineysa in kalsoonida shacabku ku Qabeen Madaxda Qaranka Hoos u dhacday
Daraasad laga sameeyay lix gobol oo ka tirsan Soomaaliya ayaa lagu ogaaday in madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedayada ay lumiyeen kalsoonida shacabka.
Daraasaddani oo ay sameeyeen hay’adaha Ipsos Limited iyo Farsight Africa Research ayaa muujineysa in 48% ay rumeysan yihiin in waddanka uu ku socdo jihada saxda ah.
Balse waxaa jira kala duwanaansho goboleed, sida gobalka Banaadir, oo ku yaal magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, halkaasi oo 34% muwaadiniinta ku nool ay rumeysan yihiin in waddanka uu ku socdo jiha khaldan.
Aragtidan dadka gobolka Banaadir ayaa ku saleysan arrimaha la xiriira amni darrada, musuq-maasuqa, si xun u isticmaalka dhaqaalaha iyo weliba gaabiska ku yimid kobaca dhaqaalaha dalka.
Sida lagu sheegay natiijada daraasaddani, 42% muwaadiniinta Soomaaliya ayaa dareensan in sanadkii la soo dhaafay waxba aysan ku kordhin dhaqaalaha dalka.
Heerka kalsoonida ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ku qabaan madaxweyne Maxamad Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad hoos ugu dhacday.
Sida ku cad daraasaddani, sannad gudahiis ayay 19% hoos u dhacday kalsoonidii madaxweynaha ay ku qabeen shacabkiisa, iyadoo sanadkii 2017-kii, heerka kalsoonida madaxweynaha ay mareysay 86%, balse haatan ay tahay 67%, tan oo weli ah tiro aad u sarreysa marka la barbardhigo inta badan madaxda dunida.
Sidoo kale, kalsoonida ra’iisalwasaare Xasan Cali Kheyre ay ku qabaan shacabka ayaa hoos u dhacday oo gaartay 62% halka sanadkii 2017-kii ay ahayd 83%.
Lahaanshaha sawirkaRADIO MUQDISHO
Image captionKalsoonida ra’iisul wasaaraha ayey daraasadda sheegtay inay hoos u dhacday 21%